ल्हासापु कुकुर जातको जानकारी र तस्वीरहरु - कुकुरहरु
ल्हासापु कुकुर जातको जानकारी र तस्वीरहरु
ल्हासा एप्सो / पुडल मिश्रित जात कुकुरहरू
१० महिना पुरानोमा ल्हासा-पूलाई रेगी गर्नुहोस् 'जब ऊ पपी थियो, उसलाई सबै समय समात्नु पर्थ्यो। ऊ अझै पनी पकड गर्न रुचाउँछ जबकि ऊ लगभग २० पाउण्ड तौल छ। उहाँ बच्चाहरूसँग महान हुनुहुन्छ, र मेरो धेरै सुरक्षात्मक हुनुहुन्छ। जब म र मेरो श्रीमान् कुनै कारणवश हाम्रो आवाज उठाउँदछौं, ऊ भुंक्यो र पछाडिको खुट्टामा उभिएर आफ्नो अप्रसन्नता देखाउँदछ। उसलाई थाहा छ म कहिले बिरामी छु। म माइग्रेनबाट पीडित छु र ऊ भुँडीमा पल्टेर सुत्ने ढ quiet्गले सुत्ने छ र प्रायः 'मलाई हेर' मेरो निधारमा एकदमै नरमसँग चाट्छ वा मेरो अनुहारमा उसको नाक छुन्छ। ऊ 'डरलाग्दो' छ - उसले रूखको गहना भेट्नुभन्दा पहिले मेरो श्रीमानले हेरिरहेको छैन भनेर पक्का गरी चारैतिर हेर्नेछ, बिहान हाम्रो ओछ्यानमा टिप-टू टिप्नेछ कि मेरो श्रीमान् उसले सुन्नेछैन र भन्नुहोस् 'तल झर्नुहोस्! ' उहाँ हामीलाई सधैं हाँस्नुहुन्छ। '
shih tzu pekingese मिश्रण hypoallergenic
ल्हासा-पू एक शुद्ध प्रजनन कुकुर होईन। यो बीचको क्रस हो ल्हासा अप्सो र Poodle । मिश्रित जातको स्वभाव निर्धारण गर्न उत्तम तरिका भनेको क्रसमा सबै नस्लहरू हेर्नु र तपाईंलाई कुनै पनि नस्लमा फेला परेका कुनै पनि सुविधाहरूको कुनै संयोजन प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जान्नु हो। यी सबै डिजाइनर हाइब्रिड कुकुरहरू उत्पादन गरीरहेका छैनन् 50०% शुद्ध प्रजननको 50०% शुद्ध प्रजनन हुन्। यो प्रजनकका लागि प्रजननको लागि धेरै सामान्य छ बहु-पुस्ता पार ।
ACHC = अमेरिकी क्यानाइन हाइब्रिड क्लब
DBR = डिजाईनर ब्रीड रजिस्ट्री
DDKC = डिजाईनर कुकुरहरू केनेल क्लब
IDCR = अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनर क्यानाइन रेजिस्ट्री®
मान्यता प्राप्त नामहरू
अमेरिकी क्यानाइन हाइब्रिड क्लब = ल्हासा-पू
डिजाईनर ब्रीड रेजिस्ट्री = ल्हासा पू
डिजाईनर डग्स केनेल क्लब = ल्हासा-पू
अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनर क्यानाइन रेजिस्ट्री®= ल्हासापु
'होली, हाम्रो--महिना पुरानो ल्हासापु प्रेमले भरिएको छ! उनी खेल्न मन पराउँछिन्, उनी डुँडिन मन पराउँछिन्, उनी खान मनपराउँछिन् र तिम्रो गोडामा काट्न मन पराउँछिन् !!! उनको घरेलु प्रशिक्षण राम्रो हुँदै गइरहेको छ, यद्यपि उनी कहिलेकाँही दुर्घटनामा पर्छिन् जब हामी उसको स to्केतहरूमा पर्याप्त ध्यान दिइरहेका हुँदैनौं। उनी धेरै चलाख छिन जब उनी बाहिर जान्छन् व्यापारमा, र घर फर्केर आउँछिन्, उनी सिधै भान्छाकोठामा दगुर्छिन् र फ्रिजको अगाडि माथि हेर्छिन्। हामी व्यवहारको कन्टेनर रेफ्रिजरेटरको माथि राख्छौं। एक पटक उनको उपचार गरिसके पछि उनी आउँदैछिन्! होली तौल about ½ lbs मा तौल गर्दछ, जुन लगभग एक पाउन्ड भन्दा अलि बढी उनको घरमा ल्याउँदा ऊ तौल भन्दा एक पाउण्ड आधा बढी हो। '
ग्रुम गर्न अघि गीत
'आउट, मेरो हाइब्रिड कुकुर १ वर्षको उमेरमा, जो ल्हासा अप्सो र पूडलको क्रस हो। पक्कै पनि उनी पहिलो पुस्ताको संकर होइन, किनभने उनको कुकुर बुबा र कुकुर आमा दुबै ल्हासा पू छन्। मलाई उनको हजुरबा हजुरआमाको बारेमा कुनै जानकारी छैन, त्यसैले म वास्तवमै भन्न सक्दिन कि उनी कुन ल्हासा पू संकर हुन्।
'ओउट पोडलको भन्दा बढी देखिन्छ, उसको शरीरको कपाल घुमाउरो पक्षमा अलि बढी छ र उसको शरीरको संरचना र उचाई पनि लड्सा अप्सो भन्दा पोडलको नजिक छ। तर उनीसँग सीधा कपालको लहर पनि छ, जस्तै उनको पुच्छर र उनको टाउकोमा, त्यसैले हामी उनलाई उचित 'पोडल लुक' मुकुट दिन सक्दैनौं वा उनको टाउकोको माथि अफ्रो। हामी उनको अनुहार काट्छौं, जसरी पोडलले काट्छ र हामी उनको गर्मीको कपाल 'गर्मी कट' मा राख्छौं, धेरै जसो ग्रूमिंग ब्लेड # using प्रयोग गरेर, किनभने उसको कपाल धेरै छिटो बढ्दछ। उनको नरम, कपासको अन्डरकोट पनि दैलोमा एकदम प्रवण छ। औट एक नॉन-शेडर हो तर उनको धेरै संवेदनशील छाला छ।
'आवाइट नाम फिलिपिन्स शब्द हो जसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ' गाउनु '(क्रिया) वा' गीत '(संज्ञा)। वैकल्पिक रूपमा, शब्द 'ओडिट' पनि बाइबलमा 'भजन' शब्द अनुवाद गर्न प्रयोग भइरहेको छ।
'अविट एकदम सक्रिय कुकुर हो। उनी पैदल समय मन पर्छ र खेल समय। खेल्ने समय भनेको उनी घरका वरिपरिको कुकर्म गर्न हाम्रा अन्य कुकुरहरूलाई कुट्छे र हिम्मत गर्दछ। उनी पनि हाम फाल्न सक्छिन् (ध्यान दिनुहोस्: उनको चपलताले उनी वास्तवमै उडान गर्न सक्छिन् जस्तो देखिन्छ) भुइँबाट सोफा, ओछ्यानमा, एउटा ओछ्यानबाट अर्को ओछ्यानमा, र सजिलै फर्श फर्केर।
'ओभिट अन्य व्यक्तिहरू र अन्य कुकुरहरूका लागि पनि धेरै मित्रैलो छ र बच्चाहरूप्रति कोमल छ, वास्तवमा, एक धेरै राम्रो सामाजिक कुकुर हो, जसले उसलाई फिलीपीन्सको कुकुर सगरुन डगबरोको आधिकारिक K9 रिसेप्शनिस्ट हुन योग्य बनायो। हो, र उनी प्रति दिन एक २ 'हड्डी चबाउँछिन् वा कुकुर बिस्कुट पाइन्छ कि उनी आफ्नो मुटुको आनन्दमा चिल्लाउन सक्छिन्।
'ओभिट एक द्रुत सिकारु र अति बुद्धिमान कुकुर हो। मैले क्लिकर गर्न प्रयास गरें प्रशिक्षण उनीमा, र उनले सजिलैसँग संकेतहरू 'सिट' र 'तल' लिनुभयो।
ग्रुमिंग पछि गीत
माया has हप्ताको पुरानो र २ पाउन्डमा ल्हासापु पिल्ला 'उनी खुसी र खुसीको कुकुर हो।'
'बिंगो6बर्षको ल्हासापु हो जुन म उनीसँगै पिल्ला भएको थिएँ। उहाँ बच्चाहरूसँग महान हुनुहुन्छ र वरपरका केटाकेटीहरूसँग गाउने प्रयास गर्नुहुन्छ जुन प्रायः नर्सरी कविता गीत गाउन चाहान्छन् 'त्यहाँ एक किसान थियो, एक कुकुर थियो र बिंगो उसको नाम थियो ...', र उसले आफ्नो टाउको सीधा माथि राख्यो। हावा र सोच्नको लागि गीत संग। ऊ मसँग दिनको हरेक सेकेन्ड हुन चाहान्छ र मसँग जताततै जान्छ जुन उहाँलाई लिन सम्भव छ। यदि ऊ सोच्छु कि ऊ पछाडि छोडिनेछ उसले अलग्गिने-चिन्ताका निश्चित संकेतहरू देखायो। उसले मलाई कराउनबाट रोक्नको लागि रुन्छ, रुन्छ र मसँग बस्न कोशिस गर्दछ। अनावश्यक रूपमा ऊ कारमा हुन मन पराउँछ र एक ठूलो यात्रा साथी बनाउँछ। उहाँ धेरै चलाख र प्रशिक्षित गर्न सजिलो छ। 'कुकुर व्हिस्परर' एक राम्रो प्याक नेता कसरी हुन सिक्ने मेरो स्रोत भएको छ र बिंगोले हामीले सिकेका प्रविधिहरूलाई राम्रोसँग प्रतिक्रिया दिन्छन् अर्थात् 'कुनै स्पर्श, कुनै कुराकानी, कुनै आँखा सम्पर्क छैन।' बिंगो हाम्रो परिवारको लागि एक ठूलो थप गरिएको छ र उसले पाएको जति माया दिन्छ। '
4 वर्ष पुरानो डेजी ल्हासा-पू
डेजी4वर्षको उमेरमा ल्हासा-पू 'उनी प्युर्टी छैन ???'
राजकुमारी Leia ल्हासापू एक ल्हासा एप्पो / पुडल मिश्रण हो। उनी यी तस्बिरहरूमा कम्तीमा बढ्दैछन्, तौल करिब p पाउण्ड (3..२ किलो)। उनको मालिक भन्छन्, 'उनको स्वभाव धेरै मीठो छ र उनी एकदम चलाख छिन - उनी बस्न सक्छिन्, बोल्न र हात मिलाउन सक्थिन् मलाई २ हप्ता मात्र भए पछि। उनी पनि धेरै एथलेटिक र एक भयानक जम्पर हुन्। अक्सर उनी फर्निचरबाट लिभिंग कोठाको वरिपरि जबरजस्ती उफ्रिछिन्। यो भुइँ छुने उनको खेलको प्रकार हो। '
-हप्ता पुरानो कालो ल्हासा-पू पिल्ला नामको राजकुमारी लिया
एन्जिल-हप्ता पुरानो ल्हासा-पू 'उहाँकी आमा ल्हासा अप्सु हुनुहुन्छ र उनका बुबा लघु पोडल हुनुहुन्छ। उनी आफ्नो आमा, ल्हासा एस्प जस्तो देखिन्छिन। उनको मालिक भन्छिन्, 'उनी धेरै चलाख, चंचल र घरेलु छिन्। उनी बच्चा जस्तो छिन् र हामीले उनलाई ध्यान दियौं। ”
ल्हासापूको अधिक उदाहरणहरू हेर्नुहोस्
ल्हासापु चित्रहरु १
ल्हासा एप्सो मिक्स ब्रीड कुकुरहरूको सूची
पोडल मिक्स ब्रीड कुकुरहरू
साना कुकुरहरू बनाम मध्यम र ठूला कुकुरहरू
घोडचढी राजा चार्ल्स spaniel papillon मिक्स
बक्सहरु मा सामूहिक सेल ट्यूमर
मिनी कालो र ट्यान डाचसुन्ड
dachshund ज्याक रसल मिक्स पिल्पीहरू
प्रयोगशाला चिहुआहुआ मिक्स पूर्ण बढेको
अंग्रेजी springer spaniel प्रयोगशाला मिश्रण